Raharaham-pirenena : mitaky ny hizarana ny harem-pirenena ireo CST teo aloha - Informations et Actualités sur Madagascar
Politique Raharaham-pirenena : mitaky ny hizarana ny harem-pirenena ireo CST teo aloha
Raharaham-pirenena : mitaky ny hizarana ny harem-pirenena ireo CST teo aloha
by Alpha world on 16 h 00 in Politique
Nivoaka amin’ny fanginany manoloana ny raharaham-pirenena. “Ankasitrahanay ny fanaovana ny fikaonandoha teny Ivato niresahana ny fitsinjaram-pahefana. Mitaky anefa izahay ny tena hampiharana izany ho fototry ny fampandrosoana sy ny hizarana ireo harena araka ny tokony ho izy.
Fototry ny krizy nisesy teto ny tsy nanatanterahana izany”, hoy ny Vondron’ireo mpikambana eo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny Tetezamita (CST) teo aloha, omaly teny Behoririka.
Nambaran’izy ireo tamin’ny mpanao gazety tamin’izany fa mila apetraky ny fitondrana amin’izao fotoana izao, ny fototra marin-toerana sy ny tena tany tan-dalàna. “Tokony hahitsy koa ny lalàmpanorenena. Tsy mazava sy tsy nitovian’ny rehetra hevitra izany ka nahasarotra ny fanendrena ny praiminisitra”, hoy ihany izy ireo.
Momba ny fifandraisana amin’ny any ivelany kosa, nahitsy ireto olom-boatendry ireto nilaza fa fananan’i Madagasikara ny harena an-kibon’ny tany eto. “Antony mampirongatra ny asan-dahalo anefa ny momba azy io. Tokony hametraka ny fepetra rehetra sy maka ny andraikitra entina miaro ny vahoaka sy ny fananany ary ireo harena ny fitondrana. Ho mpiara-miombon’antoka ny vahiny fa tsy miditra lalina amin’izany”, hoy ihany izy ireo.
Fametrahana filaminana maharitra
Notsindrin-dRakotovazaha Olivier manokana fa raha vao mirongatra ny fandrobana, ahina mety hitarika adim-poko izany ka hanararaotra ny vahiny hanao ny fitrandrahana ny harentsika. “Tsy ampy ny fanaovana ny “Coup d’arret” fa ilana fepetra hafa miaraka amin’izany mba ho fitazonana ny filaminana maharitra”, hoy izy.
Manampy ireo ny fitakian’ireto CST ireo ny hanaovana ny fifidianana ben’ny Tanàna amin’ity taona ity. “Mba hifidianana ny senatera. Tsy tokony handeha ila koa ny fandaniana lalàna. Mila hirosoana koa ny fampihavanam-pirenena”, hoy izy ireo.
Anisan’ny niatrika ny mpanao gazety Ralison Roger, Robivelo Michel, Rakotovazaha Olivier ary Randriamaholisoa Jules.
By Alpha world at 16 h 00